MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA CHOW CHOW DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Chow Chow Dog
'Tani waa King 3 jir ah oo caan ah oo Chow Chow oo ka socda Tracy's Royal Chow Chows ee Ohio. Waa orso weyn oo xamaal ah. '
Chow Chow waa eey weyn oo bakhaar leh. Labada astaamood ee ugu caansan ee loo yaqaan 'Chow Chow' waa carrabkiisa buluug-madow iyo lugaha dambe ee tooska ah ee toosan, taas oo ka dhigaysa inay socoto halkii laga istaagay. Madaxa waa weyn yahay waana waasac oo leh qalfoof fidsan. Afku waa ballaadhan yahay oo qoto dheer yahay. Waxaa jira ruff weyn oo madaxa ka dambeeya, taas oo siinaysa muuqaal muuqaal libaax u eg. Sanka madow waa weyn yahay oo leh sanka oo si fiican u furan. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Dhagaha yaryar ee kacsan waa qaab saddex-geesood ah oo wareegsan kuna xardhan caarada. Indhaha u eg yicibta ayaa ah kuwo qoto dheer oo midabkoodu mugdi yahay. Laabta ayaa ballaadhan oo qoto dheer. Dabada ayaa sare loo dhigay, oo aad loogu dhawaaday dhabarka. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Cufnaanta, cufnaanta, jaakad dhogorta leh waxay ku timaaddaa laba nooc, oo siman oo qallafsan. Midabada ugu caansan waa casaan adag, madow, buluug, qorfe iyo kareem, laakiin sidoo kale waxay ku imaan kartaa midab, cawl, ama caddaan dhif ah. Koodhku mararka qaarkood wuxuu leeyahay daahyo fudud ama mugdi ah, laakiin marna midabkeedu midabkiisu midab yahay ma leh.
Chow Chow waa eey edeb leh. Wanaagsan carruurta. Haddii ay bartaan bisadaha iyo xayawaannada kale ee guryaha deggan markay yar yihiin, way la heshiin doonaan markay qaangaaraan. Waa in si fiican loo noqdaa bulsho la doorbido markay da 'yar yihiin Waxay u baahan yihiin maamul adag iyo tababar ka bilaabanaya eey. Haddii aad korsanaysid eey ama eey weyn, milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay dejiyaan sharciyada eygu raacayo oo ku tiirsanaanayo. Tani waa nooc aad u fara badan oo u baahan a milkiilaha xukuma . Milkiilaha kooxdan eeygu waa inuu ahaadaa qof deggan oo dabiici ahaan adag, kalsooni leh oo iswaafaqsan. Iyada oo ilaaliye noocan oo kale ah, Chow Chow si fiican ayuu u horumarin karaa Dhibaatooyinka ayaa soo ifbaxa marka eygu la noolaado milkiileyaal aan la noolayn fahmaan sida loo noqon karo, oo loo joogi karo, booska alfa . Haddii aad u ogolaato eeygan inuu aamino inuu yahay masuulka gurigaaga wuxuu noqon doonaa madax adag, ilaalin mararka qaarna si qaawan oo aan nidaamsanayn. Ilaa eeyuhu dareemo mooyee milkiilayaashu inay maskax aad u adag yihiin, waxay si adag uga shaqeyn doontaa sidii loo ilaalin lahaa booska alfa ku jira xirmo aadanaha . Markay taasi dhacdo isuma tixgeliso inay tahay wax xun, laakiin waxay si dabiici ah kuugu sheegeysaa sida eeyaha ay isula xiriiraan inay go aamineyso goorta iyo sida wax loo qabanayo. Waxay noqon doontaa mid iskeed u gaadhay illaa heer madax-adayg waxayna noqon kartaa mid ka-ilaalin badan. Markaad leedahay Chow Chow oo aaminsan inuu isagu yahay taliyihii dadka , Shisheeyayaashu waxay isku riixaan eeygan, wuxuu noqon karaa mid dagaal badan, oo dadka u sheega inuu jeclaan lahaa inuu helo booskiisa. Boosku macno badan ayuu u leeyahay eey. Waa ixtiraam adduunka eeyga. Chow Chows oo aaminsan inay madax yihiin inta badan waxay noqon doonaan eey hal qof ah, oo aad daacad ugu ah sayidkooda, in kastoo laga yaabo inuu u dhaqmo sidii loo ilaaliyay, xitaa iyaga oo la jira. Alpha Chow Chows waxay jecel yihiin inay xukumaan eeyaha kale. Chow Chow oo aan 100% ku qanacsanayn insaanka ayaa ah madaxa way adkaan doontaa in la adeeco tareenka. Chow wuxuu dareemi doonaa inay IT u baahan tahay inay go'aan ka gaarto waxa iyo goorta wax la qabanayo, ma ahan aadanaha, maadaama bina-aadamka ay tahay inuu dhageysto IT-ga. Kuwani maahan sifooyinka 'Chow Chow', waa dabeecado dabiici ah, oo ka dhasha awoodda bani'aadamnimada ee liidata eeyga. Haddii aad jeclaan lahayd inaad yeelato eey, hubi inaad adiga, iyo inta kale ee qoyskaaga, ogaataan sida loo noqdo alfa. Dhammaan xubnaha qoyska, iyo aadanaha kale ee eyga ku hareeraysan, waa inay uga sarreeyaan sida ay u kala horreeyaan eeyga. Chow Chows wuxuu noqon karaa mid aad u fara badan oo leh milkiileyaal dadban, laakiin qaado isla eeyga oo aad la dhigto milkiile leh awood dabiici ah oo wuxuu noqon doonaa edeb, dulqaad iyo si fiican u soo kooba, samaynta wehel qoys oo aad u fiican.
Mid ka mid ah milkiilaha ayaa ii sheegay in Chow-kooda uu samayn karo khiyaamo, oo uu si fudud ugu barto taas. Waa tan xigasho milkiilaha leh saddex carruur ah iyo saddex bisadood:
'Chowgeyga 8 jirka ah ee Chow wuxuu sameeyaa' khiyaanooyin 'kala duwan, oo ka bilaabma qoob ka ciyaarka lugaha gadaasheeda amarka illaa rogaal celinta, iyo ka boodida lugaha gadaasheeda hawada amarka. Waxay xitaa ogtahay farqiga u dhexeeya 'isgacan qaad' iyo 'gariir,' sida ruxitaanka mankeeda si ay u qalasho ama u fiiqto qubayska / cadayashada kadib. Ka dib markii 'khiyaanadii' ugu horreysay lagu bartay da 'aad u yar, waxay badanaa barataa nashaadaadyo cusub iyada oo loo marayo habka saddexda tusaale ee asxaabteeda aadanaha, ka dibna si fudud ayey isku daydaa fekerka illaa ay ku guuleysato. Ujeedadeedu tahay inay wax ka barato oo ay ka farxiso labadeeda sayid waxay ka timaaddaa jacaylka ay dadka u qabto. Waxay jeceshahay inay la joogto dadka, xitaa shisheeyaha. Markii loo hanjabo, ama aan la hubin duruufaha ay wajaheyso, waxay si dhakhso leh u noqotaa mid difaacda qoyskeeda iyo gurigeeda.
Dhererka: 18 - 22 inji (46 - 56 cm)
Miisaanka: 45 - 70 rodol (20 - 32 kg)
Waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan cuncun indhaha ah oo loo yaqaan entropion, oo ay keento cillad xagga indhaha ah taas ayaa lagu sixi karaa qalliin. Sidoo kale u nugul dysplasia sinta, caloosha kansarka , baro kulul iyo infekshannada dhagaha. Sababtoo ah muxsigooda yar yar waxay badanaa ku khuuraan.
'Chow Chow' kuma fiicnaan doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Gurigu kuma yara firfircoonaan iyo deyr yar ayaa ku filan. Xasaasi u ah kuleylka, ayaa ku noolaan kara ama dibedda hawo qabow.
Chow Chows wuxuu noqon karaa caajis, laakiin wuxuu u baahan yahay in loo qaato a socod maalinle ah . Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay soo bandhigaan dhibaatooyin badan oo xagga dhaqanka ah.
Burushka joogtada ah ee jaakadda dhaadheer ayaa muhiim u ah ilaalinta joogtaynta, muuqaalka taagan. Noocani waa daadshe xilliyeed culus waxaana loo baahan yahay taxaddar dheeri ah marka eygu daadinayo jaakaddiisa cufan. Shaambo qallalan markii loo baahdo.
Asalka saxda ah ee Chow Chow lama yaqaan, laakiin waxaan ognahay inay tahay nooc aad u duug ah. Fosillada eyda ugu faca weyn ee la yaqaan, oo dib loogu taariikheeyay dhowr milyan oo sano ka hor, ayaa aad ugu eg qaab dhismeedka Chow Chow. Sawirro ku saabsan dheriga Shiinaha oo u muuqday Chow Chow taariikhdiisa ayaa dib ugu laabaneysa illaa 206 BC. Chow Chow waxaa laga yaabaa inuu xiriir la leeyahay Shiine Shar-Pei , maadaama labada nooc ee asalka ahi ay tilmaamayaan Shiinaha labaduba waxay leeyihiin astaamo lagu garto afka madow iyo buluugga ah. Waxa kale oo laga yaabaa inay wax ku darsatay abtirsiinyada a Keeshond , Samoyed , Reer Norway Elkhound , iyo Pomeranian . The Chow Chow wuxuu Shiinuhu u adeegsan jiray eey shaqeeya, isagoo qabanaya hawlo badan oo kala duwan sida ugaadhsade yeey, xarago leh oo jecel, u raadsashada, gaadhigii iyo garaacis yar yar, ilaalada doonta, iyo ilaalinta guriga. Eeyadu waxay u adeegi jireen Shiinaha in ka badan sidii ey ey shaqeynaya oo kale. Digaagga eyga waxaa loo adeegsan jiray sameynta jubbadaha dadka waana la cunay welina waa la cunaa, waxaa loo tixgeliyaa cunno macaan. Dabayaaqadii 1800-meeyadii Chows waxaa markii ugu horreysay ka iibsaday England ganacsato. Magaca 'Chow Chow' wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa erayga ingiriisiga ah ee 'chow-chow', oo ah eray guud oo ku saabsan dhammaan khilaafaadka iyo dhammaadka laga soo celiyay bariga fog. Qaar ka mid ah hibooyinka 'Chow Chow' waa ilaalin iyo ilaalin.
Thor the Chow Chow da'da 1 sano jir— 'Thor waa saaxiibtinimo, jacayl, jilicsan marka hore laakiin jacayl iyo in ka badan sida orso teddy ah.'
Ku jiido Chow Chow da'da 1 sano sariirta isagoo xiran koofiyad cad
Kani waa Chow Chow cirro leh iyo timo jilicsan oo Chow Chow ah. Lahaanshaha sawirka van Juttersburch Chow Chows Smooth iyo Rough
King Chow Chow da'da 3 sano jir ee socdaal ku raacaya gaariga. Waxaa ku dhajiyay Tracy's Royal Chow Chows oo ku yaal Ohio
Waa kan Dozer oo jira 1 ½ sano jir. Weli isagu waa ciyaar badan oo saaxiibtinimo badan. Dozer waxay jeceshahay ciyaarta kubbadda koleyga iyo cunista. Wuxuu ku fiican yahay carruurta wuxuuna jecel yahay inuu la macaamilo eeyaha kale. Markuu jiray 2 sano Dozer wuxuu noqday aabe. Isagu waa waalid sharaf leh oo 6 caafimaad qaba oo jilicsan oo yaryar. '
Dozer kareemka Chow Chow ee 1 1/2 sano jir jiifa
Tani waa Khan qof weyn. Sawir waxaa qaaday John D. Jackson
Kani waa Khan the Chow Chow oo ah cunug yar oo 8-toddobaad jir ah. Sawir waxaa qaaday John D. Jackson
Eeg tusaalooyin badan oo ah Chow Chow
Chow Chow Sawirada 1
Chow Chow Sawirada 2
Chow Chow Sawirada 3
Sawirada Chow Chow 4
Chow Chow Sawirada 5
Eeyaha Chow Chow: Sawirro guryo la ururin karo
shih tzu terrier mix eyda
sarkaal oo dahab ah isku darka mastiff ingiriisiga
20 ilaa 30 rodol oo eey ah
madow iyo caddaan poodle